Jarida Laser ee Roogga Diyaaradda ee Warshadaha Duulista - Laser Dahab ah
Digital Laser Machine Jarida Die
Jarida Laser ee Roogga Diyaaradda ee Warshadaha Duulista
Tiknoolajiyada Laser ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa duulista iyo aerospace, sida goynta leysarka iyo qodista qeybaha jet, alxanka laydhka, goynta leysarka iyo goynta laser-ka 3D. Waxaa jira noocyo kala duwan oo mishiinnada leysarka ah ee hawshan oo kale ah, tusaale, awood sare CO2 laser iyo leysarka fiber-ka ee qalabka kala duwan. Goldenlaser waxay soo bandhigeysaa xalka goynta leysarka ee rooga diyaaradda.
Qaabka goynta dhaqameed ee rooga duulimaadku waa jaris farsamo. Waxay leedahay cillado aad u weyn. Xagga goynta waa mid aad u liidata waana sahlan tahay in la isku wareejiyo. Dabagalka sidoo kale wuxuu ubaahan yahay in gacan lagu gooyo geeska kadibna la tolo geeska, iyo nidaamka dib udejinta kadib way adagtahay.
Intaa waxaa sii dheer, rooga duulimaadku aad buu u dheer yahay. Jarida laser-ka waa habka ugu fudud ee roogga diyaaradaha loogu jaro si sax ah oo hufan. Laser wuxuu si otomaatig ah u daboolaa cidhifka bustayaasha diyaaradda, looma baahna tolmo dambe, oo awood u leh inuu gooyo cabbir aad u dheer oo saxsan, badbaadin kara shaqaalaha iyo dabacsanaan sare oo qandaraasyada yar iyo kuwa dhexe.
Qalabka Roogga lagu dabaqay ee ku habboon Goynta Laser
Nylon, Non-tolmo, Polypropylene, Polyester, Dhar isku dhafan, EVA, Leatherette, iwm
Ahmiyada Muhiimka u ah Goynta Laser ee bustaha Duulista
Si otomaatig ah u xiji cirifka rooga, looma baahna mar labaad tolid.
Miiska xamuulka ayaa miiska u goynaya qalabka miiska goynta si toos ah, uma baahna faragelin gacan qabasho ah inta lagu guda jiro jarista, keydinta qarashaadka shaqaalaha.
Goynta saxda saxda ah ee qaababka aadka u dheer.
Codsiyada La Xiriira
Codsiyada la xiriira ee roogagga ku habboon jarista laser iyo calaamadeynta
Roogagga Aagga, Roogga Gudaha, Roogga Bannaanka, Albaabka, Matka Gawaarida, Gogosha Roogga, Yoga Mat, Maraatiga Marinka, Roogga Diyaaradda, Roogga Dabaqa, Roogga Logo, Daboolka Diyaaradda, Matga EVA, iwm.
Talada Mashiinka Laser
X-Long Mashiinka Goynta Laser
Qaab No.: CJG-2101100LD
Ballaca miiska goynta waa 2.1 mitir, dhererka miiskuna wuxuu ka badan yahay 11 mitir. Jadwalka 'X-Long', waxaad ku goyn kartaa qaabab aad u dhaadheer oo hal tallaal ah, looma baahna inaad kala badh ka dhigto qaababka ka dibna lagu farsameeyo qalabka intiisa kale. Sidaa awgeed, ma jiro farqi tolid ah oo u dhexeeya qaybta farshaxanka ee mashiinkani abuuro. Naqshadeynta Miisaanka ' X-Long Table Design' wuxuu u farsameeyaa qalabka si hufan oo wax ku ool leh waqti quudin yar.
Faahfaahin dheeraad ah oo soo saar ah
Xuquuqda daabacaadda © 2005-2020 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.